Isaladi yeembotyi elula nge-anchovy vinaigrette | ThermoRecipes
Isaladi yeembotyi nge-vinaigrette ye-anchovy
UkuqalaImizuzu ye456 abantuIikhalori ezingama-180
por UAscen Jiménez
Namhlanje sicebisa ukuba kuqalwe ngokusekwe kwimidumba: okumnandi Isaladi yeembotyi. Ngaphandle kwamathandabuzo, yindlela elungileyo yokuzisa le legume etafileni ngeyona mihla ishushu.
Sibeke ezimbini chives zisikiwe kodwa ungazitshintsha nge-anyanisi encinci. Phambi kokubajoyina ezinye izithako siya kwenza uhlobo pickle ngokukhawuleza, ukuhamba ngolwandle kumxube wamanzi kunye neviniga.
Siza kubeka iitumato, iminquma emnyama kunye noqobo isosi ye anchovy.
1 Isaladi yeembotyi nge-vinaigrette ye-anchovy
Isaladi elungileyo yehlobo elinokuhanjiswa njengekhosi yokuqala okanye njengokuhombisa.
Ixesha lokulungiselela: 10M
Ixesha elipheleleyo: 45M
75 g yamanzi
75g iviniga emhlophe yewayini
I-50 g chives
Ii-anchovies ezi-6 kwioyile (egalelwe amanzi)
I-60 g yeoyile ye-olive eyintombi engaphezulu
Imifuno enencasa eyomileyo
I-500 g yeembotyi ezisongiweyo, esele ziphekiwe
5 iitumato zetsheri, zisikiwe
Malunga ne-10 yomnquma omnyama
Sika ii-chives zibe ngamacwecwe amancinci. Beka amanzi kunye neviniga kwisitya, kunye neetshi ezinqunqiweyo. Sibashiya ngoluhlobo, kuloo mxube wamanzi kunye neviniga, kangangemizuzu engama-30.
Emva koko sibeka igarlic clove, ii-anchovies, ioyile ye-olive, ipepile kunye nemifuno enuka kamnandi kwiglasi. Inkqubo Imizuzwana emi-30, isantya 4.
Siyikhupha le mbotyi kwaye siyizihlambe phantsi kwamanzi abandayo. Sifaka kwisitya esikhulu. I-chives siyayihluza (ulwelo alunakusinceda) kwaye sayifaka, sakhupha amanzi kwiimbotyi. Songeza iitumato kunye neminquma emnyama.
Siyigalela yonke into ngesosi yethu kwaye siyidibanise kakuhle.
Sigcina kwifriji kude kube lixesha lokusebenza.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ii-aubergines ezikhethiweyo (uhlobo lweAlmagro)
Fumanisa ezinye iiresiphi ze: ngokubanzi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Thermorecetas » ngokubanzi » Isaladi yeembotyi nge-vinaigrette ye-anchovy
I-bacon kunye neeshizi ze muffins